ဘုရားမြတ်စွာဟောမိန့်မှာညွှန်ခဲ့သောဒေသနာမွန်များတွင် သဒ္ဓါ၊သီလ၊သုတ၊စာဂီ၊ပညာ၊ဟီရိ၊သြတပ္ပဟူသော သူတော်ဥစ္စာ ခုနှစ်ဖြာကို လောကီလောကုတ္တရာ ရတနာ ဘဏ္ဍာတိုက်ကြီးများအားဖွင့်လှစ်နိုင်ကြောင်း သော့ချောင်း များအဖြစ်တင်စားရေးသားကြသည်ကို ဖတ်ရှု မှတ်သား နာကြားခဲ့ဖူးပါ၏ ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု့တွင် ပျော်ရွှင်စွာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းလေ့ရှိသောသူကို စေတနာကောင်းလိုက်တာ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်လိုက်တာ ဟု ချီးကျူး ထောမနာပြုလေ့ ရှိသည် မဟုတ်ပါလား ၊ မည်သည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှု့ မဆို အခြေခံအားဖြင့် ရတနာသုံးတန် ကံ ကံ၏ အကျိုးကို သက်ဝင်ယုံကြည်ရာမှ စေတနာ တရား၏ စေ့စော်မှု့ဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်သည်သာဖြစ်ပါ၏။ အဘိဓမ္မာသဘောအရ ဒီစေတနာရော သဒ္ဓါသည်ပါ စိတ်၌မှီတွယ်၍စိတ်ကိုခြယ်လှယ်နေသော စေတသိက်တရားများပင် ဖြစ်ပါ၏. စေတနာအားကောင်းသောသူ၏ စိတ်သည် သူတပါး အကျိုးစီးပွားကို အကျိုးလိုးလား မေတ္တာအားဖြင့် ကူညီဖို့ ပေးကမ်းဖို့ ၀န်မလေးသလို သဒ္ဓါတရားထက်သန်နေမှု့ကြောင့် ပြုံးပျော် ကြည်ရွှင်စွာ ကူညီတတ် လှူတတ်ပြန်ရာ သူတို့၏ ရုပ်ပုံလွှာသည် စိတ်အစဉ်ကြည်လင်ရွှင်ပျသကဲ့သို့ပင် အဆင်းရူပ လှပနေပါတော့သည် . ထို့ပြင် သဒ္ဓါကိုပင် လက်အသွင်ဖြင့် တင်စားပြောဆိုမှု့များလဲ ရှိပါ၏ ။ လက်မရှိသောသူသည် သူတပါး ပေးသည်ကိုလည်း မယူနိုင် ကိုယ်က လဲ မပေးနိုင်သကဲ့သို သဒ္ဓါတရား မရှိသောသူသည်လည်း ကိုယ်ကလည်း မပေးမလှူချင်.. သူတပါးပေးလှူသည်ကိုပင် မနာလိုချင် ၀န်တိုချင်တတ်ပြန်ပါ၏ . သူတော်ကောင်း တရား နားကြားနိုင်ရေးတွင်လည်း သဒ္ဓါနား မရှိလေသမျှ အလှမ်းဝေးလွန်းနေပေစွ ဖြစ်ရကား ဒါန သီလ ဘာတခုမျှ လှူနိုင်ယူနိုင်ခြင်းလည်းရှိမည် မဟုတ်ပေရာ သဒ္ဓါမရှိသောသူကို လက်မရှိသောသူဟု တင်စားသည်မှာ လျှော်ကန်လှပေသည်။
မိမိသူတစ်ပါး နှစ်ဦးသား၏ အကျိုးများကို တိုးပွားစေမှု အမြဲတမ်းပြုလို့ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနှလုံးကောင်းရှိသော
သူတော်ကောင်းတို့၏ ဥစ္စာဖြစ်သော မြတ်သောတရား ခုနှစ်ပါးတို့၏အစကား`သဒ္ဓါ’’တရားပင်ဖြစ်ပါ၏။ သို့ဖြစ်ချေရာ သဒ္ဓါကို အထွဋ်တပ်လို့ ရှင်စောမြတ်စွာ ဘာကြောင့်ဟောခဲ့ပါသလဲဟု လေ့လာခဲ့ပါမူ သဒ္ဓါတရား၏ အရေးပါ အရာရောက်မှုကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ၏ ။
နောက်ကျိနေတဲ့ ရေဖန်ခွက်အတွင်းကို စကြာမင်းရဲ့ ပတ္တမြားရတနာ ထည့်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပင်
အမှုန်အမွှားများ အနယ်ထိုင်သန့်စင်သွားပြီး ကြည်လင်အေးမြလွယ်သလို ရတနာမြတ်သုံးပါး၏ ဂုဏ်နဲ့ ကံကံ၏
အကျိုးတရားကို ကိုးစားယုံကြည်သည့် သဒ္ဒါတရားဖြစ်တည်လာပြီဆိုရင် အကုသိုလ်ုအညစ်ကြေး အပြစ်ဘေးထိုက်စေ
နိုင်မည့် ဒုစရိုက်အတွေးမိုက်တွေ ကင်းစင်သွားပြီး ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအတွေးကောင်းများသာ ဝင်လာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှာ သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပွားတည်လာပြီ ဆိုပါလျှင် ‘သဒ္ဓံ ဥပနိသာယ ဒါနံ ဒေတိ သီလံသမာဓိယသတိ “အစရှိသည်ပြင် ပဋ္ဌာာန်းဒေသနာမှာ လာရှိသည်နှင့်အညီ အလှူကိုလဲ လှူဖြစ်၏ သီလကိုဆောက်တည်ကား ဘဝနာတရားကိုလဲ ပွားများဖြစ်တာ့ကား ဒါန အကျိုး သီလ အကျိုးတို့ကို လက်ငင်းဒိဋ္ဌ
ရနိုင်ကြကာ ကောင်းကျိုးသုခအဖြာဖြာ ရနိုင်သည်သာဖြစ်ပါ၏ ဒီတော့ကာ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရန်
အခြေခံအကြောင်းပြပါဆိုလျှင်လဲ သဒ္ဒါတရားဟုသားပြောရမည် ဈာန်တရား မဂ်တရား နှင့်အတူ လောကီ
လောကုတ္တရာ ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြစ်လာရကာ ရာထူးဂုဏ်သိန် စီးစိမ်ချမ်းသာတို၏ ပြည်စုံရခြင်း အကြောင်း
ရင်းပြပါ ဆိုလျှင်လည်း ဤသဒ္ဓါကုိုသာပြရမည်ဖြစ်ပေသည်။ ပူပင်သောက ကြောင့်ကြဗျာပါဒနှင့် ဒုက္ခအေးရာ ခေမာသောင်ကမ်း အရောက်လှမ်းဖို့ တရားမြတ်ကျင့်ဖြစ်ရန် အခြေခံကို လမ်းကို ပြပါဆိုလျှင်လဲ သဒ္ဓါ ကိုပင် ပြရပါလိမ့်မည်။သို့ဆိုပါလျှင် လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသောချမ်းသာမှန်သမျှ ရလိုကြသူတိုင်းသည် နက်ရှိုင်းလှသော မိမိတို့၏ ရင်းတွင်းတနေရာမှာ ရတနာမြတ်သုံးပါး၏ဂုဏ်တော်များနဲ့ ကံကံအကျိုးကို ယုံကြည်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားခြင်းဟူသော သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပွားတည်ရှိသင့်လှပါ၏။
“သဒ္ဓါ” တရားပြည်စုံကြသောကြောင့် ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းဒါနပန်းနဲ့ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကို စောင့်စည်းခြင်း သီလစောင့်ထိန်းဖြစ်ရကား ထိုဒါန သီလတို့၏အကျိုးတရားကြောင့် ချမ်းသာခြင်း .ကျန်းမာခြင်း၊ဘာဝနာ အကျိုးကြောင့် ညဏ်ပညာတွေ ကြီးကြရသည်သာဖြစ်ရလေကြောင့် လူ့ဘဝ လူ့ချမ်းသာရလိုသူတိုင်းသည် သဒ္ဓါတရားကိုလက်ကိုင်ထားရမည် ဖြစ်ပါ၏။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာကြွယ်ဝကြပေမဲ့ သဒ္ဒါကင်းမဲ့ မလှူခဲ့သောကြောင့် အခြွေရံကင်းမဲ့ ဂုဏ်ကင်းမဲ့သော့ အထီးကျန် အကျည်းတန် လူတန်းစားများလဲ ရှိနေသည်ကိုဝန်းကျင်မှာ တွေ့မြင်နိုင်ပေရာ“သဒ္ဓါ”တရား ခေါင်းပါးခြင်း၏ ရလဒ်ဟုသာ မှတ်ယူဆင်ခြင်ရမည် ဖြစ်ပါ၏
“ သဒ္ဒါမရှေး-မပေးမလှူ-မုန်းဆေးဟူ၏ ပေလှူတတ်သော် ချမ်းဆေးကျော်တည်”့ဟု မလာဒေဝ လင်္ကာ
မြတ်ကျမ်းစာတွင် မာန်လည်ဆရာတော်ကြီးက ရေးသားမိန့်မှာခဲ့ပါ၏ မြင့်မြတ်၍ အထက်တန်းကျသောသူတို့ လိုက်နာကျင့်သုံးးနေကြသည့်“သဒ္ဓါ”တရားဟူသည် တကယ်တော့ လူတိုင်း၏ရင်မှာ ဖြစ်ခဲတည်ခဲပါ၏ ။ ဒါကြောင့်ပင်လျှင် ဘုရားရှင်က “ဒုလ္လဘာ သဒ္ဓါ သမ္ပတ္တိ”ဟု ဟောပြုခဲ့ပြန်သလို ပဓာနိယင်္ဂဏတရားငါးပါးမှာလဲ ထိပ်ဆုံးကထား၍ ဟောကြားခဲ့သကဲ့သို့ပင် သပ္ပူရိသူပနိဿယ သူတော်ကောင်းတို့ မှီဝဲဆည်းကပ်အပ်သည့် တရားမြတ်မှာလဲ ထိပ်ဆုံးကပင်ထားလျှက် သုံးနှူံးဟောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဒီတော့ကား လောကကြီးမှာ သဒ္ဓါတရားများများရှိခြင်းသည်ချမ်းသာမြင့်မြတ် ပညာတတ်၍ လူ့ရပ်နတ်ဋ္ဌာန်တွင်စီးစိမ်ခံစားရန် အကြောင်းကောင်း ဖြစ်ရကား ကံကောင်း ဉာာဏ်ကောင်းအကြံကောင်း၍ ကောင်းကျိုးစုံစွာ ရလိုသူတိုင်းသည် ရတနာမြတ်သုံးပါး ဂုဏ်တော်များနှင့် ကံ ကံ၏အကျိုးတရားများ ကို အားထားယုံကြည်သည့် သဒ္ဓါတရားရှိအောင် ကြိုးစားသင့်လှပါ၏
ဤအကျဉ်းးမျှ လေ့လာမှတ်သား သိရရုံဖြင့် ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့် ကံ ကံ၏အကျိူးတရားများက်ို အာထားယုံကြည်သည့် သဒ္ဓါတရားရဲ့  အရေးကြီးပုံကို သိနိုင်လောက်ပါ၏ ။နိကယ်ငါးရပ် ပိ်ဋ္ဋကတ်သုံးပုံ အလုံးစုံမှာ အကျယ်ချဲ့ ကာ လေ့လာပါမူကား သဒ္ဓါအမျိုးအစား အများပြားနဲ့အတူ သဒ္ဓါရှေ့ထား ပြုတဲ့ကုသိုလ်များရဲ့ ထူးခြားပြည့်စုံ အကျိုးပေးမှု့ အဖုံဖုံကို ပို၍ ပို၍ပင် လေးလေးနက်နက် သိမြင်လာရမည် ဖြစ်ပါ၏။ဤမျှဖြင့် မြတ်ဘုရားက သဒ္ဓါတရားကို သူတော်ဥစ္စာ ခုနစ်ဖြာတွင် ဘာကြောင့် ထိပ်ဆုံးတွင် တင် ဟောကြားခဲ့သည်ကို ခန့်မှန်းသိနိုင်လောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ လူသားတိုင်း၏ ဟဒယ ခေါ်ငြား နှလုံးသားမှာ သူတော်ကောင်းတို့ထုံးကို နှလုံးမူ အတုယူလျှက် သဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပွား တည်ကာ ရတနာမြတ်သုံးပါး ကံတရားနှင့် မိဂုဏ် ဘဂုဏ် ဆရာ့ဂုဏ်ကို ကြည်ယုံလေးမြတ် ပူဇော်တတ်သော အလေ့အကျင့်တွေရရှိကြပြီး ဆရာ မိဘ လမ်းညွှန်သွန်သင် ပဲ့ပြင်ဆုံးမမှု့အောက်မှာ ယုံကြည်မှု့သဒ္ဓါအပြည့်ဖြင့် လမ်းဆက်လျှောက်ကြလို့ ပေါက်မြောက်အောင်မြင် ကြီးပွားပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေသားဟု ဆုမွန်ဆန္ဒပြုရင်း သဒ္ဓါတရားအကြောင်း အကျဉ်းမျှကို လေ့လာ တင်ပြအပ်ပါသတည်း……။
မေတ္တာသီသေန စိတ္တေန မြန်မာ့အားမာန် အရှင်နန္ဒ၀ံသ(ညောင်ကန်အေး)
Posted by မိုးကောင်းသား at 6:06 PM